Fanohanana ny sehatra tsy miankina : misy izao ny Tahiry ho fampandrosoana ny indostria | NewsMada
Fanohanana ny sehatra tsy miankina : misy izao ny Tahiry ho fampandrosoana ny indostria
Nanomboka omaly hatramin’ny rahampitso 22 novambra, ny fankalazana ny Andron’ny indostria aty Afrika. Ho antsika eto Madagasikara, misy ny fampisehoana ataon’ireo orinasa maro eo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, Analakely. Maneho amin’ny mpanjifa ny vokatra ao aminy sy ny dingana vitany avy izy ireo. Hita tokoa fa tsy mena-mitaha amin’ny vokatra hafa avy any ivelany ny “Vita Malagasy”, manaporofo izany ny toerana misy azy ireny amin’ny varotra eto an-toerana sy any ivelany.
Na izany aza, nohamafisin’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny fanohanana ny indostria malagasy amin’ny alalan’ny Tahiry ho an’ny fampandrosoana ho an’ny indostria ( FDI). “Amin’ny maha Tahiry ho an’ny fampandrosoana azy izay, apetraka izany ho fanohanana ny indostria, hanampy azy ireo amin’ny fanavaozana ireo milina na fitaovana ao aminy; hanampy ihany koa amin’ny fandraisana teknolojia vaovao sy fampitàna izany any amin’ny hafa”, hoy ny tale jeneralin’ny indostria, Ramindo Gaëtan. Iombonan’ny sehatra tsy miankina, ny fanjakana sy ny trano fiantohana ny FDI, vao lany teny amin’ny Antenimierampirenena.
Mpanohana koa ny BNI Madagascar
Raha eo amin’ny lafiny vola izay ihany, tsy tapaka mandray anjara amin’ny fotoana tahaka izao ny BNI Madagascar, manana ny fahaiza-manao sy efa niara-niasa amin’ny indostria eto an-toerana. Fomba iray izay hanohanana ny « Vita Malagasy ». Mandray anjara feno ny BNI Madagascar, mampahafantatra ny lalàna momba ny indostria ary manaitra ny tanora amin’izay toerana misy ny indostria izay eo amin’ny fampandrosoana ny toekarena.
Tsiahivina ihany koa fa miara-miasa akaiky amin’ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (Sim) ny BNI, manome toky ireo mpikambana ao aminy, torohevitra sy miara-dalana amin’izay tokony hatao rehetra. Fomba fiasa vaovao eo amin’io banky io ny fiarahana amin’ireo mpandraharaha, fanamafisana ny toerany amin’ny fanokafana masoivoho ampolony maro nanomboka ny taona 2015.